Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 117 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
Nin horey u ahaa Baadari heysta Mad-habka Orthodox-ka Diinta Nasraaniyada, kana soo jeeda magaalada Sofia ee dalka Bulgaria, islamarkaana soo Muslimay ayaa ka sheekeeyay sida uu u qaatay Diinta Islaamka. Ka hor inta uusan qaadan Diinta Islaamka waxa magaciisa uu ahaa “Atanas Mekhalof”, isagoo islaamnimadiisa kadib magaciisa u badalay “Cabdulillaah”, […]
Muqdisho : Qarax Xooggan oo ka dhacay meel ku dhow Xarunta Madaxtooyada.
Qarax xooggan ayaa xilligii Salaadda Maqrib laga maqlay agagaarka Xarunta Madaxtooyada Dowladda Fedraalka ee magaalada Muqdisho. Illaa iyo hadda lama hayo faah faahin ku aadan qaraxa iyo cidda lala beegsaday, balse goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa kadib la maqlayay rasaas xooggan oo goobta ka dhaceysa. Qaraxa caawa ka dhacay […]
Sheekh Khaalid Baa-Dharfi oo Farriin u diray Xoogagga Muqaawamada Yemen. (DAAWO)
Farriin Muuqaal ah oo ay baahisay Mu’assasada Al-Malaaxim ee dhanka Warbaahinta u qaabilsan Mujaahidiinta Al-Qaacidda ee Jaziiratul Carab ayaa waxaa kasoo muuqday Sheykh Khaalid Baa-Dharfi oo ka tirsan Hogaamiyeyaasha Mujaahidiinta dalka Yemen. Kalimadda oo soconeysay muddo 11 daqiiqo ah waxa uu Sheekhu talooyin iyo tawjiihaat ugu jeediyay xoogagga Muqaawamada dalka […]
DHAGEYSO : Fadliga Maalinta 9aad ee Bisha Dul-Xijjah.
Maalinta Arbacada waxay ku beegan tahay 09 bisha Dul-xijjah, waana maalinta ay Xujeyda Beyta Allah taaganyihiin Banka Carafa, iyadoo ruknigaasna uu yahay kan ugu weyn Acmaasha Xajka. Dadka aysan usuura gelin inay ka qeyb galaan Manaasikta Xajka waxaa loo jeediyay inay maalinkaas soomaan si ay u helaan dembi dhaafka iyo […]
Dagaallo ka dhacay deegaanno ka tirsan Gobollada Bakool iyo Hiiraan.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa weeraray saldhigyo ay Ciidamada Xabashida ku leeyihiin degmooyinka Waajid iyo Moqo-Kori oo ka kala tirsan Gobollada Bakool iyo Hiiraan. Saqdii dhexe ee xalay waxay Mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee Baay iyo Bakool weerareen dhowr fariisin oo Ciidamada Xabashidu ku leeyihiin degmada Waajid, iyadoo halkaas […]
Warar sheegaya in Hogaamiyeyaal Al-Qaacidda ka tirsan laga sii daayay Xabsi ku yaalla Iiraan.
Telefeshinka SKY News oo soo xiganaya ilo wareedyo dhinaca Sirdoonka ah ayaa baahiyay in Xabsi kuyaalla dalka Iiraan laga sii daayay Hogaamiyeyaal ka tirsanaa Mujaahidiinta Al-Qaacidda oo dalkaas ku xirnaa, iyadoona lagu badashay Diblumaasi Iiraani ah oo gacanta ku hayeen Mujaahidiinta Al-Qaacidda ee Jaziiratul Carab. Sida uu TV-gu sheegay, Seddax […]
DHAGEYSO : Wareysi lala yeeshay Sheekh C/raxmaan Xudeyfa.
Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka Sheekh C/raxmaan Xudeyfa ayaa wareysi dhinacyo taabanaya siiyay Idaacadda islaamiga ah ee Al-Andalus. Sheekh Xudeyfa wuxuu wareysigiisa kusoo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee wilaayada iyo kulamdii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Kismaayo ee ay lahaayeen Maamul goboleedyda cadowga u shaqeeya. Halkan Ka […]
Sucuudiga : Xaaji Calooshiisa Maqas laga dhex helay!.
Nin ka mid ah Xujeyda dhulka Xarameynka u tagay gudasha Manaasikta Xajka ayaa la kulmay arrin amakaag iyo fajaciso ku noqotay markii loo sheegay in calooshiisa Maqas laga dhex helay. Maamulaha Xarunta kormeerka caafimaadka ee Garoonka Boqor Cabdal-Caziiz ee magaalada Jiddah Cabdul-Qani Al-Maaliki ayaa sheegay inay farriin soo gaarsiiyeen Hey’adaha […]
Kalluumeystada oo loo gacan qabtay Burcadda Badda.
Hey’ad qaabilsan kalluumeysiga caalamiga ah ayaa sheegtay in Maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye ay si sharci darro ah ugu kalluumeystaan Xeebaha Soomaaliya. Qoraal kasoo baxay Hey’addan waxay ku sheegtay in Maraakiib laga leeyahay dalalka Yemen iyo Iiraan ay xaalufiyaan Xeebaha Soomaaliya, iyadoo sanad walbana kooxahaas burcadda ah ay kalluunka Soomaaliya […]
Argagixisnimo Loo adeegsanayo La Dagaalanka “Argagixisada”.
Golaha Qaranka Xuquuqda Insaanka ee Dalka Kenya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano (KNCHR) ayaa soo saaray warbixin dheer oo Booliiska dalkaasi ay ku eedeynayaan inay geystaan dilal aan waafaqsaneyn sharciga oo ay kula kacayaan dhallinyarada Muslimiinta, iyadoo mar marsiyo loogu dhiganayo waxa loogu yeero la dagaalanka Argagixisada. Tan […]